Dia ahoana tokoa moa izany ? | 102 KARA
Dia ahoana tokoa moa izany ?
Taitra ary lasa tokoa ny- sain’ny maro raha nahita sy nandre ny fanontaniana napetrak’Andriamatoa Faniry Alban RAKOTOARISOA, Filohan’ny Antoko Politika Madio ,na ny APM tao amin’ny fandaharana DON-DRESAKA tao amin’ny TV Plus Madagascar ny alahady 01 oktobra 2017.
Efa marobe loatra angamba ny fahasahiranana sy ny fahoriana ary ny tsy fandriam-pahalemana mianjady ka dia efa donto tanteraka.
Aiza ho aiza tokoa mantsy izao, hoy ny fanontanian’ Andriamatoa F.A RAKOTOARISOA ny tohin’ny RAHARAHA
—–Ireo dahalo niova fo, satria toa vao maika mirongatra izy ireny ankehitriny.
—–ny raharahan’i SOAMAHAMANINA satria efa mikonaina mihintsy ny vahoaka fa anjakazakan’ny vahiny ny tany fivelomany.
—–fandraisan’andraikitra mba tsy hisian’ny fitsaram-bahoaka amin’ ny faritra maro eto amin’ny Nosy.
—–ny raharahan’ANTSAKABARY izay naha-kila forehitra ny trano an-jatony maro ary naha-tra-boina ny mponina tao
—–ny tohin’ny namonoan’ny sasany ny ben’ny tanàna maro, ary nanaovana ihany koa letrezana hametrahana ben’ny tanàna tsy lanim-bahoaka akory.
——ny tohiny sy ny voka-pikarohana tamin’ny SAKOROKA niafara tamin’ny vonoan’olona tamin’ny 26 Jiona 2016
——ny fakana an-keriny na kidnapping tetsy sy teroa. Niala ny Fanjakana fa tsy nampandre azy hono ireo niharan’izany ka dia tsy hita izay atao.
——-Tsy mba nandrenesana akony ihany koa izay nampiasaina ny vola azo tamin’ny bailleur de fond tany Paris izay noheverina hanarenana ny orin’asa Air Madagascar.
——-Dia nanao ahoana koa ny niafaran’ny vola 3.OOO.OOO EUROS tratra tany PARIS nentin’i Ramatoa Nicole mpanolon-tsaina ny Filoha
——-Ny raharahan’ny mpanolon-tsainan’ny Filoha dia Claudine RAZAIMAMONJY izay toa lasa very an-javony fotsiny.
——–Nanao ahoana koa ny niafaran’ireo RONGONY 131 gony — ireo SOKATRA sy VOLAMENA tratra teny IVATO saika ahondrana any ivelany.
——–ny raharaha RIANA Andramandavy VII, sa kosa senatera ireny ka mahazo misalotra ny akanjon’ny tsy maty manota.?
——–ny mbola fitohizan’ny fanondranana an-tsokosoko ireo ANDRAMENA na dia mba efa nilaza aza ny Fanjakana fa efa noraràna izany
———ny mikasika ny fihanaky ny PESTA. Toa tsy tena taitra ny Fanjakana raha tsy nisy ny tera-tany vahiny avy atsy Seychelles maty vao tena nikoropaka. Izay mantsy vao tena afa-baraka satria ny aretina pesta dia aretina azo avy amin’ny loto.
Lava be ny fitanisàna fa ny azo lazaina koa dia ny hoe : raha vao misy fihetsiketsehana na fanehoan-kevitra ary indrindra moa fa ny FITOKONANA » NA DIA HITA SY EKENA FA MARI-POTOTRA AZA IZANY » dia avoaka ny EMMOREG sy mpitandro filaminana maro hanaparitaka izany amin’ ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso. Soa ihany aza fa izay aloha, fa raha tsy izany dia efa FATIN’OLONA MIKARARANA no nisy teto Madagasikara.
Dia hoy ny maro hoe : AHOANA IHANY TOKOA RE IZY ITY E ?
Rah Ckicky – Soamahamanina
3 octobre 2017 - 0 h 46 min Social 238 vues